In Ka Badan 40 Qof oo Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Kenya. – Shabakadda Amiirnuur
October 10, 2018 9:36 am by admin Views: 44
Ugu yaraan 42 Qof oo Kenyaan ah ayaa ku naf waayay shil gaari oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa Nairobi iyo Kisumu kadib markii uu wadada ka baxay gaari Bas ah oo ay saarnaayeen dad gaaraya 50 qof sida laga soo xigta laamaha ammaanka ee dalkaasi.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka gaariga saarna badankooda ay kasoo jeedeen gobolka Kericho ee dhaca galbeedka wadanka shilkuna uu dhacay xilli habeen ah taas oo adkeysay in gurmadkii loo baahnaa ay helaan sidaasna ay ugu dhinteen biyihii Kanaalka marayey.
Hey’adda Bisha Cas xarunteeda magaalada Nairobi ayaa barteeda twitterka ku xaqiijisay in gaarigu uu dhowr jeer iska daba rogmaday inkastoo ay shaaciyaan in wali aysan heynin macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan qaabkii ay wax u dheceen.
Shilalka ayaa wadanka Kenya ka noqday kuwasoo laa laabta oo si joogta ah uga dhoco haba ugu badnaate dariiqa dheer ee isku xira magaalada Nairobi iyo Mombasa oo kamid ah, dariiqyada ugu isticmaalka badan gudaha wadanka Kenya.
Tirakoob rasmi ah oo dowlada Kenya ay soo saartay ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 3Kun oo qof ay ku dhinteen Shilal ka dhacay gudaha wadanka Kenya sanadki 2017ka oo kaliya, halka Hey’ad gaaleedka WHO-na ay sheegtay in dadka shilalki 2017ka wax ku noqday ay kor u dhaafayaan 12Kun oo qof.